Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Khasaare Dhimasho Leh Gaystay oo Kenya Kadhacay.
Qarax Khasaare Dhimasho Leh Gaystay oo Kenya Kadhacay.
Posted by ONA Admin	/ June 17, 2017
Ugu yaraan afar qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay, 11 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuurkii ay saarnaayeen ay ku qaraxday miino lagu aasay wadada dhinaceeda, deegaanka Madax-waraabe oo u dhow Lafey, una dhaxaysa Ceel Waaq iyo Mandera ee Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Baabuurkan ayaa la sheegay in uu ka tagay magaalada Ceel-Waaq kuna siijeeday Mandera, waxaa Dadka dhintay ku jiray Nin caaqil ah oo laga yaqaanay degaanka, waxaana loo qaaday dadkii dhaawacmay Isbitaalka Lafey
Waxaa laga shakisan yahay in miinada ku qaraxday Baabuurka ay wadada ku aaseen ururka Al-shabaab oo dagaal kula jira ciidamadda Kenya ee ka howlgala Koofurta Soomaaliya. Guddoomiyaha Gobolka Waqooyi Bari Maxamuud Saalax ayaa sheegay in saddex kamid ah dadka dhintay ay isla goobta ku geeriyoodeen, waxaa kaloo uu sheegay in dadka qaarkii ay qabaan dhaawacyo halis ah.
Bishii aynu soo dhaafnay ee May, ilaa 30 qof oo 2o kamid ah ay yihiin ciidamadda booliiska Kenya ayaa ku dhintay miinooyin lagu aasay wadada dhinaceeda iyo weerar kale oo la aamisan yahay in ay soo qaadeen Maleeshiyada Al-shabaab.